Nandritra ny fanadihadiana no nahalalana fa polisy am-perinasa ny iray tamin’ireo efatra tra-tehaka. Ireo roa vavy tamin’izy efatra dia efa mpamerin-keloka. Ireo tra-tehaka ihany no nilaza fa polisy koa ny iray tamin’ilay tafaporitsaka. Lasan’ny lehibeny niakatra any an-drenivohitra ny antontan-taratasy miaraka amin’ilay mpitandro filaminana voarohirohy fa ireo telo hafa kosa naiditra am-ponja vonjimaika aty amin’ny fonja aty an-toerana, afak’omaly”, hoy ny zandary mpiandraikitra ny serasera any Ankazobe. Araka ny fampitam-baovao hatrany, fotoana fiakaran’ny vokatra izao, indrindra ny vary ka azo heverina fa manam-bola ireo tantsaha. Izay no mahatonga ny mpanendaka midina any ambanivohitra. Ao anatin’ny ezaka fijaikoana mpangarom-paosy ny zandary any an-toerana, indrindra ny alatsinainy izay fotoanan’ny tsena any amin’ny renivohitr’i Vonizongo.